Iimpawu kunye neempawu malunga ne-Zika Virus
Iimpawu malunga ne-Zika Virus
Ingculaza yeZika ibangela isifo se-Zika virus (iZika), isifo esibangela iimpawu ezibandakanya imfiva, ukugqithisa kunye nentlungu edibeneyo. Ngelixa ezininzi iimpawu zincinci, i-Zika inokubangela ukuba iziphene ezinzima zokuzalwa.
Intsholongwane ixhaphaza imikhosi yabantu ngokulunywa ngamangqungqwana asulelekileyo aseAedes . Intsholongwane ingasasazeka ngokukhawuleza ngokutshintshela umiyane kwaye iya kuba yanda kakhulu e-Afrika, e-Asia naseMerika.
Zibophelele ezi ngxaki ezibalulekileyo malunga negciwane leZika kunye nezindlela onokuzikhusela ngazo kwisifo.
I-Virus Zika ifuna umkhosi ukuba uphile
Njengazo zonke iintsholongwane, i-virus yeZika ayikwazi ukusinda yedwa. Kuxhomekeke kumsinge walo ukuze uphendule . Intsholongwane ibambelela kumgca weselfowuni yeseli yommiselo kwaye iya kugxinwa yiseli. Intsholongwane ikhupha i-genome yayo kwi- cytoplasm yeseli yesistim, eyala ukuba ii- organelles zeseli zivelise izixhobo zentsholongwane. Iikopi ezongezelelweyo ze-virus ziveliswa kude kube yilapho iifomflu zintsholongwane zandula zivule i-cell kwaye zikhululekile ukuba ziqhubeke kwaye zichaphazele ezinye iiseli. Kucingelwa ukuba i-virus yeZika iphazamisa iiseli ze-dendritic kufuphi nesiza sokungena kwi-pathogen. Iiseli zeDendritic ngamaseli asegazini amhlophe aqhelekileyo afumaneka kwiishubhu ezifumaneka kwiindawo ezidibaniselana nommandla wangaphandle, njengelusu. Intsholongwane isasazeka kwi- lymph nodes kunye negazi.
I-Virus yeZika inePolyralral shape
I-virus ye-Zika ine- RNA esisodwa ene- RNA kwaye ihlobo lwe-flavivirus, i-viral genus equka iNayile eNtshona, i-dengue, i-yellow fever kunye ne-Japanese encephalitis. I-genome yentsholongwane ijikelezwe ngumlenze we-lipid ogqityiweyo kwi-capsid protein. I-icosahedral (i-polyhedron enobuso obungama-20) i-capsid inokukhusela i-RNA ye-viral.
I-Glycoproteins ( iiprotheni ezinomqolo we-carbohydrate edibeneyo) kwi-shell ye-capsid yenza intsholongwane ifuthe iintsholongwane.
I-Virus Zika Inokusabalala NgokweSondo
I-virus yeZika inokudluliselwa ngamadoda kwintsebenziswano yabo yesini. Ngokutsho kwe-CDC, intsholongwane ihlala kwidini ixesha elide kunegazi. Intsholongwane isoloko isasazeka ngamagqagciwane anesifo kwaye ingasasazeka ukusuka kumama ukuya kumntwana ngexesha lokukhulelwa okanye xa kuziswa. Intsholongwane inokuthi isasazeka ngegazi.
I-Zika Virus ingonakalisa i-Brain neNervous System
I-virus yeZika ingonakalisa ingqondo yomntwana okhulayo obangela imeko ebizwa ngokuba yi-microcephaly. Ezi zintsana zizalwe ngeentloko ezincinane. Njengoko umntwana okhulayo ukhula kwaye ekhula, ukukhula kwakhe ngokuqhelekileyo kukubeka uxinzelelo emathanjeni enkkull okwenza ukuba isikhala siphume. Njengoko igciwane lesandulela ngculazi lichaphazela iisilini zengqondo zentsana, lumisa ukukhula kobuchopho kunye nophuhliso. Ukungabikho kwengcinezelo ngenxa yokunciphisa ukukhula kwengqondo kubangela ukuba i-gazi iwele phantsi kwengqondo. Ininzi insana ezalwa nale meko zinemiba ephuculweyo kwaye abaninzi bafa besana.
UZika uye wadibaniswa nophuhliso lwe-Guillain-Barré syndrome.
Esi sifo esichaphazela inkqubo ye- nervous eholele ekubuthathaka kwamasipha, umonakalo wemisipha, kunye nokukhubazeka kwamanye amaxesha. Umzimba womzimba womntu osuleleka kwi-virus yeZika ungabangela umonakalo kwiimbulunga ngenzame yokutshabalalisa intsholongwane.
Akukho Zonyango Zika
Okwangoku, akukho nonyango yesifo seZika okanye igonyamelo kwi-Zika virus. Xa umntu sele enesifo sengculaza, baya ku khuselwa kwiintsholongwane ezizayo. Ukuthintela okwangoku isicwangciso esona sigqwesileyo ngokubhekiselele kwintsholongwane kaZika. Oku kuquka ukuzikhusela ngokuchasa umlingo ngokusebenzisa i-insects repellent, ukugcina iingalo kunye nemilenze yakho igubungelwe ngaphandle, kwaye uqinisekise ukuba akukho namanzi okuma ejikeleze ikhaya lakho. Ukuthintela ukuhanjiswa koxhatshazo ngokwesondo, i-CDC icebisa ukusebenzisa iikhondom okanye ukuyeka isini.
Abafazi abakhulelweyo bayacetyiswa ukuba baphephe ukuhamba emazweni ahlaselwa yiZika.
Uninzi lwabantu abane-Virus Zika Ayazi ukuba banalo
Abantu abanentsholongwane yeZika bafumana iimpawu ezinobunzima ezinokuhlala phakathi kweentsuku ezimbini ukuya kwezixhenxe. Njengoko lichazwe yi-CDC, kuphela abantu aba-1 kwabangu-5 abanentsholongwane yempawu zegciwane. Ngenxa yoko, abaninzi abantu abanesifo banokungenanga ukuba banentsholongwane. Izibonakaliso zentsholongwane ye-Zika i-virus zibandakanya umkhuhlane, ukugqithisa, isisu kunye nentlungu edibeneyo, i-conjunctivitis (iso lesipinki) kunye nentloko. Usulelo lweZika luvakalayo lufunyenwe ngophando lwegazi lwebhubhoratri.
I-Virus yeZika yafunyanwa kuqala e-Uganda
Ngokweengxelo ezivela kwi-CDC, isifo sengculaza seZika saqale safunyanwa ngo-1947 kwiinkwenkwezi ezihlala kwi-Zika Forest yase-Uganda. Ukususela ekufumaneni ukusuleleka kwabantu bokuqala ngo-1952, intsholongwane isasazeke kwimimandla yasempumalanga ye-Afrika ukuya kwi-Asia-mpuma ye-Asia, i-Pacific Islands kunye neMzantsi Melika. Ukuhlaselwa kwangoku kukuba intsholongwane iya kuqhubeka isasazeka.
"I-Zika Virus" Iziko zokuLawula nokuKhuselwa kwezifo. Ukuhlaziywa ngoMeyi 12, 2016. http://www.cdc.gov/zika/.
IYunivesithi yePurus. Isakhiwo se-Zika virus sityhilekile, siphumelele phambili ekuphuhliseni unyango. " I-ScienceDaily, ngo-31 Matshi 2016. http://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160331153938.htm.
Iingxaki ezisuka kwiStock Solutions
Iimpawu Eziqhakamshelayo Ngeengubo Zomhlaba
IiPositi zeFossil zeeMpahla-Ukumba
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: -i-cartoon, -omzimba
Ungayisebenzisa i-Laundry Detergent kwi-Dishwasher?
Uhambo olukhawulezayo lweenyanga zeJupiter
Ukuvavanya njani Amandla akho e-Clairvoyance
I-Olympic Sprint kunye neMithetho yokuDlulisa
Iincwadi ezilungileyo kunazo zonke ezikummandla wase-Ottoman
Ngowe-1952: Indlunkulu uElizabethe iyaba yiNdlovukazi kwi-25
Indlela yokudweba iBatman i-DC Way ngo-1982
8 Iimveliso zesikolo zaseRetro ukusuka ebuntwaneni
Iseluleko: Isipho soMoya oyiNgcwele
Ikholeji entsha yase-Florida Admissions
Ukugqibela kwiGabby Douglas 'Ukubuya
Uludwe lweeNgcaciso zeBlue-Collar